China VS Global … — Anycall Mobile
China VS Global …
By Nyein Aung Htet November 4, 20192Mins Read
Xiaomi နဲ့ Redmi နဲ့ ဖုန်းတွေမှာ China အလုံး နဲ့ Global အလုံး ဆိုပြီး နှစ်ခု ကွဲပြားနေတာကို အားလုံးသိကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် လူတော်တော်များများက အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားက ကွာခြားချက်တွေကို အခုထိ သေသေချာချာ မသိတဲ့ အပြင် အဲ့ဒီနှစ်ခုကို ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။
Xiaomi နဲ့ Redmi ကို အရင်ဆုံးရှင်းပါ့မယ့်။ အရင်က Redmi ဟာ Xiaomi ရဲ့ ဖုန်း Series တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီလ အရောက်မှာတော့ Redmi ကို Xiaomi က Sub-brand (လုပ်ငန်းအခွဲ) အဖြစ်ခွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ Redmi ကို Xiaomi က ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။
China အလုံးဆိုတာ ဘာလဲ…?
Xiaomi နဲ့ Redmi ဟာ တရုတ်နိုင်ငံ အခြေပြု စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခု ဖြစ်တာနဲ့ အညီ တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းမှာပဲ အသုံးပြုဖို့ ရည်ရွယ် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဖုန်းတွေဟာ China အလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်။
Global အလုံး ဆိုတာ ဘာလဲ…?
Xiaomi နဲ့ Redmi ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို စမတ်ဖုန်းတွေ ထုတ်လုပ်တင်ပို့နေတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခု ဖြစ်တာကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို တင်ပို့ဖို့ ရည်ရွယ် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဖုန်းတွေဟာ Global အလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်။
China အလုံးနဲ့ Global အလုံးနဲ့ ဘာကွာသလဲ…?
ဒီနေရာမှာ Software နဲ့ Hardware ကို နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ ပြောရပါမယ်။ China အလုံးနေနေ Global အလုံးနေနေ သူတို့မှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားတဲ့ Hardware တွေကအတူတူပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Xiaomi နဲ့ Redmi ကပဲ အဲ့ဒီဖုန်းတွေကို ထုတ်လုပ်ထားတာမိုလို့ပါ။
Software မှာတော့ ကွာပါတယ်၊ China အလုံးတွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းမှာပဲ အသုံးပြုဖို့ ရည်ရွယ် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဖုန်းတွေဖြစ်တာကြောင့် တရုတ်ပြည်တွင်းမှာ အသုံးပြုတဲ့ Apps တွေ အများကြီးပါဝင်နေပါတယ်။ China ဆိုတာ Google အဆင့် မပါတဲ့ အလုံးတွေလို့လည်း အလွယ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
*Google တွေ တစ်ခါတည်း မပါဝင်ပေမယ့် ထပ်ထည့်ပြီးတော့ သုံးလို့ရပါတယ်။
Global အလုံးကတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို တင်ပို့တာဖြစ်လို့ Google Apps တွေ တစ်ခါတည်း ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ အပြင် တရုတ် Apps တွေမပါဝင်ပါဘူး။ နောက်ပြီးတော့ Global အလုံးကတော့ Official Warrenty နဲ့ Services Charges တွေကြောင့် China အလုံးတွေထက် ဈေးအနည်းငယ် ပိုကြီးပါတယ်။
China အလုံးနဲ့ Global အလုံးမှာ သူသာ ကိုယ်သာ အားသာချက် အားနည်းချက် ကြီးကြီးမားမားတော့ မရှိပါဘူး။ နှစ်ခုလုံးက သူ့ဟာနဲ့သူ ကောင်းတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
China အလုံးကနေ Global အလုံးဖြစ်အောင် ပြောင်းလို့ရသလား…?
ဟုတ်ကဲ့ ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ Hardware တွေကအတူတူပဲ ဖြစ်ပြီး Software ပဲ ကွာတာဖြစ်လို့ ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ အချိန်အနည်းငယ်တော့ ပေးရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ China အလုံး အရင်ထွက်ပြီးမှ Global အလုံးက ထွက်တာဖြစ်လို့ပါ။
လူတွေပြောပြောနေတဲ့ Beta တို့ Stable တို့ ဆိုတာကရော…?
တစ်ချို့တွေက Global လား Stable လား ဆိုပြီးတော့ မေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲတာမှားပါတယ်။ ပြန်ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။
Beta ဆိုတာကတော့ စမ်းသပ်ဆဲလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
Stable ဆိုတာကတော့ တည်ငြိမ်သည်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
Xiaomi နဲ့ Redmi နဲ့ ဖုန်းတွေမှာ Android ကို အခြေခံထားတဲ့ သူတို့ရဲ့ MIUI ဆိုတာကို ထည့်ထားပါတယ်။အဲတာတွေက အဲ့ဒီဖုန်းတွေရဲ့ MIUI အခြေအနေကို ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ Global အလုံးမှာရော China အလုံးမှာရော Beta နဲ့ Stable ဆိုပြီး နှစ်မျိုးထပ် ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် ရှုပ်နေတာလေးတွေ ရှင်းသွားမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။